Famerana ny vidin-tsolika-HIDITRA AN-TSEHATRA NY FANJAKANA -
AccueilLa UneFamerana ny vidin-tsolika-HIDITRA AN-TSEHATRA NY FANJAKANA
Tsy tokony hatao mahagaga intsony ny fiakaran’ny vidin’ny solika satria efa miaina ao anatin’ilay vidin-tsolika tena izy isika amin’izao fotoana izao. Ny vidin’ny iray Barila any amin’ny foibe mpamokatra solika araka izany no mamaritra ny fiakarana, na ny fidinan’ny vidiny. Tato ho ato dia tafakatra hatrany amin’ny 53 Dolara ny vidin’ny Barila amin’ny solika teo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Antony nampiakatra ny vidin’ny solika teto Madagasikara. Ankoatra ny vidin’ny solika eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, dia anisan’ny mamaritra ny fiovaovan’ny vidiny eto amintsika ihany koa ny sandan’ny Dolara. Amin’ny ankapobeny araka izany, dia miankina amin’ireo toe-javatra miisa roa ireo no mamaritra ny vidin-tsolika eto Madagasikara. Tranga izay maneho fa efa malalaka ny fifaninanana eo amin’ny tsenan’ny solika eo amin’ireo mpandraharaha mpivarotra izany eto amintsika.
Na izany aza, dia tsy mitazam-potsiny ny fanjakana malagasy manoloana izao fiakarana izao ho fitsinjovana ny fiainam-bahoaka. Tsy tokony hisy fiantraikany ratsy amin’ny fiainam-bahoaka mantsy ny fiakarana, na dia eo aza ny fampiharana ny vidin-tsolika tena izy. Nankatoavina teo anivon’ny filan-kevitry ny governemanta omaly araka izany ny didim-panjakana namaritra ny fananganana rafitra iray hametra ny tokony ho vidin-tsolika farany ambony. Ity rafitra ity araka izany no hamaritra ny fetra farany ambony eo amin’ny vidin-tsolika eto amin’ny firenena. Mbola ity rafitra vao hatsangana ity ihany koa no hamaritra ny fampiakarana, raha toa ka tafahoatra ny fiakaran’ny vidin’ny solika eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Izany hoe ity rafitra ity no handanjalanja ny fampiakarana eto amintsika tsy hisy fiantraikany ratsy eo amin’ny fiainana andavanandron’ny vahoaka malagasy, raha toa ka misy fiakarany be tampoka ny vidin’ny solika eo amin’ny tsena iraisam-pirenena.